Ganacsatada Soomaaliyeed Ee Koonfur Afrika Oo Lagu Amray Inay Albaabada U Laabaan Goobahooda Ganacsi – Marqaanmedia24.com
Ganacsatada Soomaaliyeed Ee Koonfur Afrika Oo Lagu Amray Inay Albaabada U Laabaan Goobahooda Ganacsi
May 15, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 0
Boliska dalkaasi ayaa la geliyey Heegan Buuxda, kadib, markii Ganacsatada Soomaalida iyo kuwa Afrikaanka ee ka xoogsada Degmooyinka Waqooyiga ka xiga magaalladda DARBIN lagu amray inay goobahooda Ganacsiga wada xiraan maalinta Jimcaha ee soo socota.
Shabakadda Wararka ee TimesLive ayaa qortay inay Ururka Ganacsatadda ee Gobalka Waqooyi ee dalkaasi faafiyeen Qoraalkaas Digniinta, iyago osheegay inay mas’uul ka yihiin Ganacsatada caadiga ee Deegaankaas.
Qoraalka waxaa lagu faray Qaxootiga Soomaalida iyo kuwa Afrikaanka inay xiraan goobahooda Ganacsiga iyo inay muddo 14-cisho ku joojiyaan dhamaan Hawlgalladooda Ganacsiga.
Milkiilayaasha Dukaamanka Maxaliga waxay ku eedeeyeen Gnaacsatada shisheeyaha inay iyaga bannaanka ka dhigeen Ganacsigooda, taasi oo sii hurisay Xiisadda.
Muwaadiniinta Soomaalida ee Ganacsiga ku leh Deegaanadda INANDA, NATUZUMA, KAWAMASHU iyo FENOKIS ayaa sheegay inay rumeysan yihiin inay Warqadaasi tahay Cabsi dadban iyo inay mar kale kicin karto Falalkii Shisheeye-nacaybka ee ka dhacay dalkaasi ama kuwo u ek Boobkii dhacay 4 sanno ka hor.
6 qof ayaana lagu dilay iska horimaadyo dhex maray Muwaadiniinta Shisheeyaha iyo Dadka Deegaanka oo isku qabsaday arrimaha shaqada.
Golaha Mujtamaca Soomaalida deggan Gobalka KUWAZULU NATAAL waxay qoraal u direen Madaxda Deegaanka, Duqa magaalladda iyo Boliska dalkaasi, waxayna ka codsadeen inay so ofarageliyaan Arrinta, lana qaado tallaabooyin, ka hor intaysan xaalladdu isku bedelin colaado ku sii fafai kara Deegaanadda aysan dhibaataddu ka jirin.
Dhinaca kale, Afhayeenada Boliska Gobalka Kuwazulu Nataal, Dhamme Noqobayl Gawaala ayaa u sheegtay Shabakadda TimesLive in Boliska deegaanka heegan la geliyey, kuna baraarugsan yihiin Qoraalka Digniinta ee ku dhex wareegayso Deegaanka.
Waxay intaasi ku dartay inay jiraan Kulamo lala yeelanayey dhinacyadda kala duwan, si looga wada xaajoodo sidii horey loogu socon lahaa, loogana gudbi lahaa Xiisadda
Afhayeenadda waxay kaloo xustay inaysan ilaa iyo hataan jirin Cabsi ama Shilal oo Boliska lagu soo wargeliyey, waxayna rajo ka muujisay Kulan kale oo Toddobaadkan looga hadlayo Xiisadda ka dhalatay Qoraalkii Digniinta ahaa.
DHAGEYSO+SAWIRO: Ra’iisul Wasaare Kheyre Oo Ubax-Dhigay Taalada SYL